China Non-toxic Fool's Day ရယ်စရာကစားစရာ အနံ့အသက်ဆိုးများအတွက် ဟာသနှင့် နောက်ပြောင်မှုများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | ပင်းဝေ
အဆိပ်မရှိသော Fool's Day ရယ်စရာကစားစရာ အနံ့အသက်ဆိုးများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ မွှေးပျံ့သောရနံ့ဖြန်းဆေးသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော မွှေးကြိုင်သော ဖျန်းဆေးဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသောအခါတွင် အနံ့အသက်ဆိုးထွက်သည့် အနံ့ဆိုးထွက်သည်။
ပုံနှိပ်နည်း-4ရောင်
အမျိုးအစား- လူမိုက်များနေ့၏ ဖျော်ဖြေရေးအရုပ်များ၊ Halloween...
မူရင်းနေရာ- Guangdong, China
ဒီအနံ့သင်းသင်းလေးဟာ ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို ပြက်ရယ်ပြုချင်လျှင် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပစ်ပါ။ မှုတ်လိုက်ပါ။ ပုလင်းထဲက ပမာဏလောက်တော့ ကြာရှည်ခံပါတယ်။ လွှတ်လိုက်သည်နှင့် အနံ့အသက်ဆိုးများက လေကို ဖြည့်ပေးသည်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ။
ပစ္စည်းအမည် Fart spray/ အနံ့မွှေးပျံ့သောဖြန်းဆေး
အဲတုန်းက လူမိုက်များနေ့၊ Halloween...
Size လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ D: 52mm၊ H: 128mm
ငွေပေးချေမှု T/T၊ အပ်ငွေ 30% ကြိုတင်
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် 48pcs / ရောင်စုံကတ်တွန်
1.Environmentally friendly and non-toxic content
2. သီးသန့်နေရာများတွင် အချိန်အကြာကြီး ထိုင်ပါ။
3.Professional ဖော်မြူလာ၊ စိတ်ကြိုက်ချစ်စရာပုံစံများ
4.Skin-friendly, သာလွန်အရည်အသွေး, နောက်ဆုံးပေါ်စျေးနှုန်း
1. bear snow spray နှင့်ပတ်သက်သော သင်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ခွင့်ပြုပါသည်။
2. သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုကို ၎င်းပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ခွင့်ပြုထားသည်။
3. ပုံသဏ္ဍာန်များသည် မပို့ဆောင်မီတွင် ပြီးပြည့်စုံသော အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။
April Fool's Day တွင် အခြားသူများအပေါ် လှည့်ကွက်များကစားခြင်းသည် အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အခြားသူများနှင့် လှည့်စားကစားရန် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်ပါတီများကို ပျော်ရွှင်ရန် သူငယ်ချင်းအချို့ကို သင် ဖိတ်ကြားနိုင်သည်။ ထို့နောက် ဂိမ်းကစားသည့်အခါတွင် လူများသတိမထားမိဘဲ အနံ့အသက်ဆိုးကို ဖြန်းဆေးကို အသုံးပြုပါ။
မွှေးပျံ့သောရနံ့ဖြင့် လူတိုင်းကို ရယ်မောလိုက်ပါ။
ဦးထုပ်ကိုဖွင့်ပါ။ အပေါ်ထောင့်အနည်းငယ်ရှိ ပစ်မှတ်ဆီသို့ နော်ဇယ်ကို နှိပ်ပြီး နော်ဇယ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီ တိတ်တိတ်လေး ဖြန်းပေးပါ။ လှည့်ကွက်တွေ ကစားချင်သလား။
Aerosols အားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းတို့ကို လေစီးဆင်းမှု အားနည်းသော နေရာတွင်၊ သေးငယ်သော၊ ပိတ်ထားသောနေရာ သို့မဟုတ် မီးတောက်များအနီးတွင် မဖြန်းသင့်ပါ။
နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပြီး အပူချိန် 50 ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်ထက် မကျော်လွန်ပါစေနှင့်။
အသုံးပြုပြီးသည်နှင့်ပင် အပေါက်ဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မလောင်ကျွမ်းစေရပါ။
ဇောက်ထိုးမဖြန်းသင့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကြောင်းအရာသည် နော်ဇယ်ကို ပိတ်ဆို့နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မျက်လုံးကို မဖြန်းမိအောင် သတိထားပါ။
အဝတ်မပါသောမီး သို့မဟုတ် ဖယောင်းတိုင် (炽热的) ပစ္စည်းတစ်ခုခုတွင် မဖြန်းပါနှင့်။
အနီးကပ် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်မှလွဲ၍ ကလေးများကို လက်လှမ်းမမီပါနှင့်။
Guangdong Pengwei Fine Chemical Co.,Ltd တွင် R&D အဖွဲ့၊ အရောင်းအဖွဲ့၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့စသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အချင်းရှိသော ဌာနများစွာ ပါဝင်သည်။ မတူညီသောဌာနများ၏ ပေါင်းစပ်မှုမှတစ်ဆင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးကို တိကျစွာတိုင်းတာပြီး ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဖွဲ့သည်3နာရီအတွင်းတုံ့ပြန်မှုကိုပေးလိမ့်မည်၊ ထုတ်လုပ်မှုကိုလျင်မြန်စွာစီစဉ်ပါ၊ အမြန်ပေးပို့ပါ။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်လိုဂိုကိုလည်း ကြိုဆိုနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုကို လျင်မြန်စွာ စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် 15 ရက်မှ 30 ရက်အထိ ကြာပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုပြီးပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်ပေးပါမည်။ မတူညီသောနိုင်ငံများတွင် သင်္ဘောတင်ချိန် မတူညီပါ။ သင်၏ပို့ဆောင်ချိန်နှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Q3: အနည်းဆုံး ပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ။
A3: ကျွန်ုပ်တို့၏အနည်းဆုံးပမာဏမှာ 10000 ကျပ်ဖြစ်သည်။
Q4- မင်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအကြောင်း ဘယ်လိုပိုသိနိုင်မလဲ။
A4: ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပြီး သင်သိလိုသော ထုတ်ကုန်ကို ပြောပြပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးဖြစ်သည့် aerosols တွင် 13 နှစ်ကျော်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ MSDS၊ ISO၊ Quality Certificate စသည်တို့ရှိသည်။
သင်သည်မည်သည့်အရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြဿနာများရှိပါက, ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်တုံ့ဆိုင်းမနေပါနဲ့။ အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများ သို့မဟုတ် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်လည်း စာတိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ယခင်- ပန်းအလှဆင်ရန်အတွက် PRC ပန်းပုလဲမှုတ်မှုတ်ဆေး
နောက်တစ်ခု: ဆံသားထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံး လန်းဆန်းစေသော အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော ထုတ်ကုန်များ လျှော်မရတဲ့ ဆံပင်ခေါင်းလျှော်ရည်မှုန့် ဖြန်းဆေး